Muuqaal Yar oo Pixel ah 3.91mm Muuqaal Muuqaal Gudaha ah oo Muujinaya Shirka Shirka Cabirkiisa: 4mx3m Goobta: Slovak Eachinled waxay leedahay xalal badan oo gudaha ah oo loo yaqaan 'LED', xaddiga yar ee gudaha ee fiidiyowga fiidiyooga ah oo u dhexeeya 1.6mm, 1.9mm, 2.5mm, 2.9mm, 3.91mm gudaha, inbadan oo loo isticmaalo soo bandhigida TV-ga, shineemo, qolka shirarka shirkadaha ...
Dhacdooyinka Gudaha Masraxa Hogaanka Led Wall P4.8 SMD Bandhigga Led Gudaha
Dhacdooyinka Gudaha Marxaladda Marxaladda Led Wall P4.8 SMD Muuqaalka Muuqaalka Gudaha: 3x2m Nooca Wax Soo Saarka: P4.8 Dhammaadka usbuuca waxaan caadi ahaan ku aragnaa dhacdooyin badan oo ka socda xarumaha laga dukaameysto, soosaarida alaabada dukaamada casriga ah, daryeelka maqaarka ee ku saabsan dhiirrigelinta wax soo saarka cusub, soo bandhigida gaariga mobilada iyo alaabooyin kale. dallacsiinta. la technol ...
Eachinled P3 HD qalooca Gudaha Screen LED for mashruuca Casino
Bedka shaashadda: 20.736mx2.304m. Waxay ku yaalliin: Warbaahinta xayeysiinta ee Qubrus ayaa laga beddelay wargeysyada raadiyaha dhaqameed iyo buugaagta illaa shabakadda telefishanka ee hadda jirta iyo soo-bandhigga xirfad-yaqaannada gudaha / banaanka. Eachinled wuxuu sii wadaa inuu barto hal-abuurnimada, wuxuu boos ka sameystay warshadaha soo-bandhigga. Anaga...
Immisa nooc oo habka rakibaadda ah ee hudheelka ah?
Waxaa jira 3 qaabab rakibid ah inta badan hoteelka. Ed Lagu rakibay shaashadda LED-ka gidaarka gidaarka Dhexdiisa oo la fuulay macnaheedu waa in lagu dhejiyay bartamaha marxaladda. Masraxa labadiisa dhinacba waxaa ku yaal guddiga KT, rinjiyeynta buufin ama daah maro ah shaar qurxin, taas oo dadka uun u oggolaanaysa inay sawir keliya arkaan. Noocan ah LE ...
P3.9 gudaha 500 mitir murabac oo hogaaminaya shaashadda ayaa ku jiri doonta keyd dhamaadka bishaan
Baahida loo qabo darbiga fiidiyowga ah ee P3.9 ayaa ka badan inta la keenayo, waxaa jira 500 mitir oo laba jibbaaran oo hogaaminaya waa la iibiyay maalmahan, sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan keydinno 500 mitir oo squre mitir kale oo fiidiyowgan ah. Muxuu qaybtani hogaamintu caan u ahayd? Daraasad xiiso leh ayaa daraasad muujineysa iyadoo ay ugu wacan tahay shaashadda kirada gudaha ee gudaha ...
Ledwall Wixii Dhacdooyinka Tooska ah ee Pope Francesco ee Talyaaniga
Cinwaanka: Talyaaniga Ledwall Cabbirka: 6mx4m Sannadkan, Pope Francesco wuxuu ku soo laabtay Talyaaniga wuxuuna u yimid inuu soo booqdo shirkadda macaamiisheena 7th, Abriil si uu u qabto adeeg kiro ah Runtii waa sharaf weyn inaan siino darbiga isaga. P6.25 guddiga kirada bannaanka ayaa loogu talagalay 2016, barta iibka ee l ...